मनोरंजन – Page4– " कञ्चनजंगा News "
निर्माता दीपकराज गिरी र उनको टिमले चलचित्र ‘छक्का पन्जा ४’को घोषणा गरेसँगै यसले चर्चा पाइरहेको छ । अर्कोतिर, यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति आउँदो बर्षको दशैंलाई घोषणा गरेसँगैयसले चलचित्र क्षेत्रलाई नै तरंगित …
४ दिनमा समेत सलमानको फिल्म ‘दबंग–३’ले १०० करोड कमाउन बक्स अफिसमा असफल
पछिल्लो केहीसमय यता भारतमा सीएए र एनआरसीलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको छ, जसको बाबजुद पनि सलमानको ‘दबंग–३’ले बक्स अफिसमा राम्रो कलेक्शन गरिरहेको छ । एक साता नपुग्दै सलमानको फिल्मले ९० करोडको …
पछिल्लो केहीसमय यता भारतमा सीएए र एनआरसीलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको छ, जसको बाबजुद पनि सलमानको ‘दबंग–३’ले बक्स अफिसमा राम्रो कलेक्शन गरिरहेको छ । एक साता नपुग्दै सलमानको फिल्मले ९० करोडको हाराहारीमा बक्स अफिस कलेक्शन गरिसकेको छ ।
बक्स अफिस इन्डिया डट कमका अनुसार ‘दबंग–३’ले सोमबारका दिन ९ देखि १० करोडको हाराहारीमा कलेक्शन गरेको छ ।
अहिलेसम्ममा सलमान खान, किच्चा सुदीप, सोनाक्षी सिन्हा, सई मञ्जरेकर लगाएतको मुख्य भूमिका रहेको यो फिल्मले ८९.१५ करोडको आँकडा पार गरिसकेको छ ।
‘दबंग–३’ले पहिलो दिन (शुक्रबार) २४.५० करोड, शनिबार २४.७५ करोड र आइतबार ३१.९० करोडको व्यापार गरेको छ । फिल्मको सलमान खानको चुलबुल पाण्डे भूमिकालाई दर्शकहरुले खुब रुचाइरहेका छन् ।
नेपाली कथानक चलचित्र ‘सेल्फी किङ्ग’को क्यारेक्टर तस्बिर सार्वजनिक ( केहि तस्बिरहरु सहित)
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘सेल्फी किङ्ग’को क्यारेक्टर तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रका मुख्य पात्र विपिन कार्कीको क्यारेक्टर तस्बिर सार्वजनिक गरिएको हो । विपिनले दर्शकसँग सेल्फी खिच्दै गरेको देखि सिकर्मीको …
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘सेल्फी किङ्ग’को क्यारेक्टर तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रका मुख्य पात्र विपिन कार्कीको क्यारेक्टर तस्बिर सार्वजनिक गरिएको हो ।
विपिनले दर्शकसँग सेल्फी खिच्दै गरेको देखि सिकर्मीको काम गरिरहेको तस्बिर निर्माण पक्षले सार्वजनिक गरेको हो । हास्य कलाकारको जिन्दगीको कथालाई चलचित्रले उठान गरेको छ ।
हास्य कलाकार गाउँमा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा जाँदाको कथालाई चलचित्र ‘सेल्फी किङ्ग’ले भन्ने छ । निर्देशक दिनेश राउतले निर्माण गरेको चलचित्रलाई विशाल सापकोटाले निर्देशन गरेका छन् । कथा पनि निर्देशक स्वयमको हो ।
चलचित्र माघ २४ लाई रिलिज डेट लिएको छ ।
हलमा नआउँदै कानूनी झमेलामा फस्यो दीपिकाको ‘छपाक’, लाग्यो स्क्रिप्ट चोरीको आरोप
दीपिका पादुकोणको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘छपाक’ रिलीज हुनुपूर्व नै कानूनी झमेलामा फसेको छ । लेखक राकेश भारतीले छपाकविरुद्ध बम्बई उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । एजेन्सीका अनुसार, राकेशले छपाकमा आफ्नो स्क्रिप्ट …
दीपिका पादुकोणको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘छपाक’ रिलीज हुनुपूर्व नै कानूनी झमेलामा फसेको छ ।
लेखक राकेश भारतीले छपाकविरुद्ध बम्बई उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । एजेन्सीका अनुसार, राकेशले छपाकमा आफ्नो स्क्रिप्ट चोरी गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले छपाकको कहानी नै आफूले लेखेको दावी गरेका छन् ।
एजेन्सीका अनुसार, राकेशले सबैभन्दा पहिले आफूले यो कहानी सोचेका थिए र ‘काला दिन’ नाम राखेका थिए । उनले दावी गरेका छन्, सन् २०१५ मा चलचित्र काला दिन नाम इन्डियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशनमा दर्ता समेत गराएका छन् ।
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘छपाक’ सत्य घटनामा आधारित छ । एसिड पीडितको कथामा बनेको यस चलचित्रमा दीपिका पादुकोण एसिड पीडित लक्ष्मी अग्रवालको भूमिकामा देखिएकी छन् ।
विपिन कार्कीको ‘गोपी’ युट्युवमा रिलिज
काठमाडौं। नेपाली कथानक चलचित्र ‘गोपी’ युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ। आरोही केसीको निर्माण तथा दीपेन्द्र लामाको लेखन/निर्देशन रहेको चलचित्रमा विपिन कार्की, वर्षा राउत, सुरक्षा पन्त भोलाराज सापकोटा, अंकित खड्का, प्रकाश घिमिरे, रमेश …
काठमाडौं। नेपाली कथानक चलचित्र ‘गोपी’ युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ।
आरोही केसीको निर्माण तथा दीपेन्द्र लामाको लेखन/निर्देशन रहेको चलचित्रमा विपिन कार्की, वर्षा राउत, सुरक्षा पन्त भोलाराज सापकोटा, अंकित खड्का, प्रकाश घिमिरे, रमेश अधिकारी, कुन्ती सिमाली, हिउँबाला गौतम, सरोज अर्याल लगायतका कलाकारको अभिनय छ।
गतवर्ष प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले गाइपालक युवाको कथालाई उठान गरेको छ।
राष्ट्रसंघद्धारा ‘निलो आकाशका लागि सफा हावा’ दिवस घोषणा
संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक वर्षको सेप्टेम्बर ७ तारिखलाई निलो आकाशका लागि सफा दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रसंघको महासभाले सो दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गरेको राष्ट्रसंघका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । दिवस मनाउने निर्णय आगामी सन् २०२० देखि लागु हुने जनाइएको छ ।
स्वच्छ तथा सफा हावा स्वास्थ्य र दैनिक जीवनका लागि अति महत्वपूर्ण भएकाले त्यस बारेमा आम नागरिकको ध्यानाकर्षण गराउन दिवस मनाउन लागिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
वायु प्रदुषणले विश्वभरीका नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने र धेरै रोग र मृत्युको कारक पनि भएकाले स्वच्छ वायुको महत्व अत्यन्त धेरै रहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
वायुको गुणस्तर बढाउनका लागि विश्वव्यापी रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान, जनचेतनामुलक अभियान चलाउनु पर्नेमा समेत सरोकारवालाहरुले जोड दिदै आएका छन् ।
‘दबंग ३’ले तीन दिनमा कति कमायो ?
सलमान खान स्टारर ‘दबंग ३’ले तीन दिनमा करिब ७८ करोड भारू कमाएको छ। रिलिजको तेश्रो दिन आइतबार सिनेमाले २९ करोड भारू कमाइगरेपछि ‘दबंग ३’को कमाइ ७५ करोड भारू पुगेको हो। रिलिजपछि …
सलमान खान स्टारर ‘दबंग ३’ले तीन दिनमा करिब ७८ करोड भारू कमाएको छ। रिलिजको तेश्रो दिन आइतबार सिनेमाले २९ करोड भारू कमाइगरेपछि ‘दबंग ३’को कमाइ ७५ करोड भारू पुगेको हो।
रिलिजपछि समीक्षकबाट चर्को आलोचना र दर्शकबाट मिश्रित प्रतिक्रिया बटुलेको सिनेमाले रिलिजको पहिलो दिन २४.५० करोड भारु कमाइ कमाइ गरेको थियो भने दोश्रो दिन २४.७५ करोड भारू कमाएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।
सिरिजकै झुर सिनेमाको प्रतिक्रिया पाइरहेको सिनेमाले यो सातासम्ममा सय करोड भारू कमाउने अनुमान रिलिज अघि गरिएको छ। बुधबार पर्ने क्रिसमस बिदाको फाइदा सिनेमाले लिने आशाका कारण यो अनुमान गरिएको थियो।रिलिजपछि सिनेमा अनावश्यक लामो भएको गुनासो भएपछि निर्माणपक्षले सिनेमाको लम्बाई ९ मिनेटले छोट्याएको छ। सिनेमामा सलमानका अलावा सोनाक्षी सिन्हा, खिचा सुदिप, साईं माजेंकर, अरबाज खान आदिको मुख्य भूमिका छ।
प्रताप दासको नयाँ गीतमा निराजन र सृष्टिको रोमान्स (भिडियो)
काठमाडौं – गायक प्रताप दासको नयाँ गीत बजारमा आएको छ । गायक प्रताप दास र गायिका सुष्मा बिश्वकर्माको सुमधुर स्वरमा ‘सुखमा मात्र होईन’ बोलको गस्ीत गएको शुक्रबार युट्युबमा सार्वजनिक गरएको हो …
काठमाडौं – गायक प्रताप दासको नयाँ गीत बजारमा आएको छ । गायक प्रताप दास र गायिका सुष्मा बिश्वकर्माको सुमधुर स्वरमा ‘सुखमा मात्र होईन’ बोलको गस्ीत गएको शुक्रबार युट्युबमा सार्वजनिक गरएको हो । यस गीतमा अम्बिका गुरुङको शब्द र सरोज पोखरेलको संगीत रहेको छ । गीतको भिडियोमा निराजन प्रधान र सृष्टि खड्का जोडीका रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
रोमान्टिक शैलीमा निर्माण भएको यस गीतको भिडियालाई निसान कास्यप घिमिरेले निर्देशन गरेका छन् । गीतको भिडियोलाई बुद्ध थापाले छायांकन गरेका हन् भने बिकास दाहालले सम्पादन गरेका हुन् । भिडियोमा निराजन प्रधान र सृष्टि खड्कालाई रोमान्टिक मुडमा देखिएको छ।
‘आमा’ ट्रेलरलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया, के होला चलचित्रमा अपेक्षा पुरा?
फागुन ९ गतेबाट चलचित्र आमा रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ। दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रको ट्रेलर केहि दिन अगाडी सार्वजनिक गरिएको थियो। सुरक्षा पन्त र मिथिला शर्मा मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्रको ट्रेलर निकै लोकप्रिय भएको छ।
नेपालको युट्युव ट्रेण्डिङ्गमा हाल ट्रेलर दोश्रो स्थानमा रहेको छ। सकारात्मक प्रतिक्रियाले भरिपूर्ण ट्रेलरको प्रतिक्रियाले निर्माण टिम उत्साहित रहेको छ। दिपेन्द्रले पशुपतिप्रसाद पछि आफुले यस्तो प्रतिक्रिया पाएको बताउदै आएका छन्। ट्रेलरले बनाएको हाईपले चलचित्र प्रति दर्शकको अपेक्षा उच्च हुने गर्दछ।
अव चलचित्र प्रति दर्शकको बढेको चासो पुरा हुने हो या होईन त्यो भने फागुन ९ गतेपछि थाह हुनेछ। शर्मिला पाण्डे निर्माता रहेको चलचित्रमा सुरक्षा र मिथिलाको साथमा सरिता गिरि, देशभक्त खनाल, आशान्त शर्मा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ।
यी हुन २०२० मा प्रदर्शनमा आउने बहुप्रतिक्षित बलिउड चलचित्र [सूचीसहित]
सन् २०१९ को विदाइको तयारीमा रहेको बलिउड सन् २०२० को स्वागतमा जुटिसकेको छ ।यसै क्रममा सन् २०२० मा आउने बलिउडका स्टार कलाकारको सिन्ेमाको पूर्वसमीक्षा पनि सुरु हुन थालेको छ । सन् …
सन् २०१९ को विदाइको तयारीमा रहेको बलिउड सन् २०२० को स्वागतमा जुटिसकेको छ ।यसै क्रममा सन् २०२० मा आउने बलिउडका स्टार कलाकारको सिन्ेमाको पूर्वसमीक्षा पनि सुरु हुन थालेको छ । सन् २०१९ मा बलिउडका स्टार कलाकारको फिल्म फितलो सावित भएको अवस्थामा सन्: २०२० मा उनीहरूको प्रभावशाली सिनेमा आउने विश्वास गरिएको छ । सन् : २०२० मा बलिउड स्टारको रिलिज हुने सिनेमा बारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
सन् २०२० मा बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको कम्तिमा तीन वटाफिल्म रिलिज हुने भएको छ । तीन ओटै फिल्मको काम आफूले सक्न लागेको अक्षय कुमारले बतएका छन् । लागतार ८ वटाहिट फिल्म दिएका अक्षयको अबको सन् २०२० मा आउने तीन वटाफिल्म पनि राम्रो बनेको उनको दाबी छ । अक्षयको आउँदो २० मेमा रिलिज हुने फिल्म लक्ष्मी बाम, एक्सन तथा हरर जनरामा आधारित छ । जसमा अक्षयसँगै अमिताभ बच्चन, तुसार कपुर, आर माधवन, कियारा आडवाणीसहितको मुख्य भूमिका छ । अक्षयकै अर्को फिल्म पृथ्वीराज आगामी २० अप्रिल २०२० मा रिलिज हुँदै छ । पृथ्वीराज चौहानको बायोविकमा आधारित यो फिल्ममा सञ्जय दत्तलगायतको अभिनय छ । फिल्ममा पृथ्वीराजको भूमिकामा अक्षय आफैं छन् । अक्षयको सन् २०२० डिसेम्बर २५ मा फिल्म बच्चन पाण्डेय रिलिज हुँदै छ । एक्सन प्रधान यो फिल्मलाई फरहाद सम्जीले निर्देशन गरेका हुन् ।
सन् २०२० मा रणवीर कपुरको दुई वटा बलिउड फिल्म रिलिज हुने भएको छ । उनको फिल्म र समशेरा र ब्रह्मास्त्र रिलिज हुन लागेको हो । । रणवीरको फिल्म समशेरा आगामी २१ जुलाइमा रिलिज हुने भएको छ । करण मल्होत्राले निर्देशन गर्ने यो फिल्ममा रोमान्समा आधारित हुनेछ । जसमा सञ्जय दत्त पनि छन् । रणवीर कपुरकै सन् २०२० डिसेम्बर १५ मा एक्सन् प्रधान नयाँ फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलिज हुनेछ । यो फिल्ममा रणवीर र आलियाको जोडी प्रस्तुत हुँदै छन् । अमिताभ बच्चन, मौनी राय पनि यसमा मुख्य भूमिकामा छन् । यसलाई अयान मुखजीले निर्देशन गरेका हुन् । यो उनको सर्वाधिक प्रतिक्षारत सिनेमा हो ।
अभिनेता रणवीर कपुरको सन् २०२० मा दुई वटाबलिउड फिल्म रिलिज हुने भएको छ । उनको फिल्म तख्त र ८३ रिलिज हुन लागेको हो । आगामी १४ मार्चमा रिलज हुने तख्त कमेडी फिल्म हो । जसमा रणवीरसँगै करिना कपुर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, जान्ह्वी कपुर हुनेछन् । आगामी १० अप्रिलमा रिलिज हुने रणवीर सिंहको फिल्म ८३ भारतीय क्रिकेटर कपिल देवको जीवनीमा आधारित बायोपिक जनरामा बनेको छ। फिल्ममा दीपिका पादुकोनलगायतको अभिनय रहनेछ ।
बलिउड अभिनेता शाहिद कपुरको सन् २०२० मा नयाँ फिल्म जर्सी रिलिज हुँदै छ । यो सुपरहिट तेलुगु फिल्म जर्सीको रिमेक हो । फिल्मलाई आगामी ३ नोभेम्बर २०२० मा रिलिज गरिने भएको छ । यो एउटा क्रिकेटरको संघर्षको कथामा आधारित छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
बलिउड अभिनेता सलमान खानको फिल्म ‘दबंग थ्री’ सिनेमा घरमा रिलिज भइरहेको छ । यसले राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । यसैबीच सलमान खानलाई विश्व रेसलिङ इन्टरटेन्मेन्टले चाँडै नै कस्टमाइज्ड डब्ल्यू डब्ल्यू ई …
बक्स अफिसमा ‘दबंग ३’ को आक्रामक शुरूवात, २ दिनमै कमायो यति धेरै
बलिउडको चर्चित चलचित्र ‘दबंग ३’ शुक्रवारदेखि प्रदर्शनमा छ । निकै नै बहुप्रतिक्षित यो चलचित्र सार्वजनिक भएसँगै २ दिनमा नै बक्स अफिसमा आक्रामक व्यापार शुरू गरेको छ । सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा …
बलिउडको चर्चित चलचित्र ‘दबंग ३’ शुक्रवारदेखि प्रदर्शनमा छ ।
निकै नै बहुप्रतिक्षित यो चलचित्र सार्वजनिक भएसँगै २ दिनमा नै बक्स अफिसमा आक्रामक व्यापार शुरू गरेको छ ।
सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा र साईं मन्जरेकर अभिनित चलचित्र दबंग ३ को आक्रामक शुरूवात देखेर सबैतिर चर्चा चुलिएको छ ।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आर्दशका अनुसार यस चलचित्रले पहिलो दिन शुक्रवार २४ करोडको व्यापार गरेको थियो ।
दोस्रो दिन यस चलचित्रले २४ करोड हाराहारीको कमाइ गरेको छ ।
यस चलचित्रले अहिलेसम्म ४७ करोडभन्दा बढी कमाइसकेको बताइएको छ ।